विश्वयुद्ध हुँदै ट्रम्प-किमको सुरक्षासम्म तैनाथ ‘गोर्खाली’लाई भारतले चिनेकै छैन ! - Riddle Nepal
By santosh On Jun 12, 2018
सन १८१५ मा बेलायती सेनाले नेपालमाथि धावा बोल्यो । तर बेलायतीहरु गोर्खालीबाट सजिलै पराजित भए । त्यसपछि बेलायती सेनाका अधिकारीहरुले सोचे कि यदि गोर्खालीलो पराजित गर्न सकिँदैन भने उनीहरुलाई आफ्नो सेनामा सामेल गर्न अवश्य सकिन्छ ।
त्यसपछि नेपाल र बेलायतबीच भएको शान्ति सम्झौतामा नेपाल गोर्खालीलाई बेलायती शाही सेनामा भर्ति हुने स्वीकृति दियो । त्यसपछि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसहित गोर्खाली सेनाले कैयन युद्ध लडे । त्यस मध्येको फकल्याण्ड युद्ध त बेलायतीहरुले जीवनभर नबिर्सने युद्ध गोर्खालीले लडिदिए ।
बेलाबेलामा गोर्खालीहरुको चर्चा धेरै नै हुने गरेको छ । विशेष त युद्धको समयमा गोर्खालीहरुको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर अहिले पनि गोर्खालीहरु फेरि चर्चामा आएका छन्- युद्धको रुपले होइन, शान्ति-सुरक्षाकाे भूमिकामा खटिएर ।
विश्वका ‘साढे’ समेत भनेर चिनिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेका उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ अनको सुरक्षाले गोर्खाहरु फेरि पनि चर्चित भएका हुन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि भारतका प्रधानसेनापति सर क्लाइड अकिन्लेन्क २५ अक्टुबर १९४५ मा काठमाडौँ आए। उनको स्वागतार्थ मार्चपास आयोजना गरियो।
सर क्लाइड अकिन्लेन्कलाई नेपाल तारा, तलबार र हेल्मेटका साथै अन्य उपहार प्रदान गरियो। उनी नेपालका गाेर्खालीले दोस्रो विश्वयुद्धमा लडेबापत के-कस्तो पुरस्कार दिने भनी छलफलका लागि काठमाडौँ आएका थिए।
जुद्ध शमशेरले नेपाली सैनिकसमक्ष भाषण दिएका थिए कि नेपाल सरकारले सैनिकका लागि ३ लाख रूपैयाँ फण्ड राखिदिएको थियो। अंग्रेज सरकारले एकमुष्ठ १० लाख रूपैयाँ दिने कुराको सर अकिन्लेकले बताए।
तत्कालीन नेपालका प्रधान सेनापति जनरल पद्म शमशेरले अंग्रेजबाट पाउने रकम १० लाख रूपैयाँ नेपालको औद्योगिक विकासमा लगाउने पनि सिफारिस गरे। पद्म शमशेरको यो निर्णले नेपाली सैनिकमा असन्तोष बढेको थियो भन्ने इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ।
सिङ्गापुर गोर्खामा कार्यरत तथा भूतपूर्व प्रहरीहरु नेपालले सिङ्गापुरसँग सिधै सम्झौता गरोस् भन्ने चाहन्छ । यसका लागि गेसोले अभियान पनि नचलाएको होइन तर, सरकारले पहल गरेको छैन ।
ब्रिटिसमार्फत जाँदा कतिपय सेवा-सुविधामा समेत कन्जुस्याइँ भएको उनीहरुको भनाइ छ । सुविधाको पाटो एकातिर होला, तर महत्वपूर्ण पाटो भनेको एउटा स्वतन्त्र देशको विषय पनि हो ।
विश्वयुद्धमा वीरताका साथ लडेका, अंग्रेस फाैजलार्इ पराजित गरेका र विश्वकै शक्तिसम्पन्न देशका नेता सुरक्षा दिइरहेका गोर्खालीले आफ्नो मातृभूमिलाई सुरक्षा दिन नसक्ने कहीँ हुन्छ र ?
हामीकहाँ ‘राष्ट्रवादी’काे पगरी गुथ्ने नेताहरू नै निकम्मा छन्, पराधिन मानसिकताले ग्रस्त छन् । उनीहरू छिमेकीसँग सीमा सुरक्षाकाे विषयमा खुलेर कुरा राख्न सक्दैनन् ।
उता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा ९७ हेक्टर र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ५८ हेक्टर भूभाग मिचिएको सीमाविद्हरू बताउँछन् ।
त्यसबीचका सरकारका पालामा पनि धेरथोर नेपाली भूभागहरु अतिक्रमित भइरहे तर पनि सिमा विवाद सुल्झाउने विषयमा कोही पनि अग्रसर भएनन् ।
सान होजे पुगे प्रधानमन्त्री ओली, विमानस्थलमा उपराष्ट्रपतिद्वारा स्वागत